Into enhle mayelana nenkukhu yilapho cishe yonke inyoni ingasetshenziswa, ungadla inyama enomsoco futhi usebenzise amathambo asele ukuze wenze isitokisi. Inyama ibuye ibe neyinkimbinkimbi futhi ingaba nesibindi, isetshenziswe, noma igwetshiwe. I-Butcher SA inezincomo zokupheka ezilandelayo:
Izinyoni zonke zitholakala kulabo abathengisi noma ngaphandle kwamagiblets. (I-Giblets yigama elisetshenziselwa ukuhlanganisa ingingila, izinso, inhliziyo, isibindi nentamo). Uma uthenga inkukhu yonke nama-giblets, i-giblets ivame ukumbozwa esikhwameni seplastiki ngaphakathi kwenkukhu.
Isikhwama esinama-giblets kufanele sisuswe ngaphambi kokupheka inyoni. Inkukhu ingaphekwa ngokuphelele noma ihlukaniswe emhlane. Izinyoni zonke zingahlanjululwa futhi zifakwe ngaphambi kokuba zigahwe noma zibhakwe. Inkukhu ehlanjululwayo ihlanjululwa futhi icwiliswe,iyoswe noma ibhakwe.
Amaphiko enza isidlo esihle noma siqala, ikakhulukazi nge-sosi enomthamo noma ngogxambuzo.
Isifuba senkukhu Namathenda
Amabele kanye namathenda anenyama emhlophe ngamanoni amancane kakhulu. Amathenda alula kancane kunesifuba sonke. Amabele kanye namathenda angabhakwa, aboshwe, aqoshiwe, afakwe epanini wodwa, kuma saladi, amasobho noma isitshalo. Kungathengwa ngaphandle kwesikhumba noma amaphiko ahlukaniswe eceleni enamathiselwe nesikhumba.
Imilenze ibhekwa njenengxenye yenkukhu emnandi kakhulu, ibhekwa njengezingxenye ezinhle kakhulu futhi ezihlwabusayo zenkukhu. Imilenze ingoswa njalo isetshenziswe ekwenzeni isitshulu.
Isibindi singumthombo omuhle wamaprotheni futhi ing’oswa epanini ne-shaladi lenyoka nezinye izitshalo ukwenza isidlo esihle. Isibindi singagazingwa, iphephandaba iNose to Tail ikhuthaza ukungena kwesibindi ebisini noma amanzi ano asidi ngaphambi kokupheka ukuze ukhanyise ukunambitheka.
ingingila, inhliziyo nezinso, zingabiliswa ukuze kukhiqize isitokisi noma usobho. Ungangezeli isibindi lapho wenza usobho, njengoba kuzokwenza usobho lubabe.
Ingingila inamavithamini A no-C, i-calcium, i-sodium ne-potassium, njalo inhliziyo ingumthombo omuhle wamaprotheni,amavitamin B12, i-folate ne-zinc. Izinso, ngokusho kweNose to Tail ,isiza ekulweni nokuguga kanye nomdlavuza. Isetshenziswa ukupheka ukudla okukhethekile phesheya.
Isiqongo senkukhu sinamancane amaphrotheni nama-amino acids. Ziyisithako esithandwayo esincane seShayina kanye ne-Italian Cibreo. Amathambo aqukethe amaprotheni, i-sodium, i-potassium, i-iron, i-zinc, i-phosphorus ne-magnesium (amaminerali) futhi asetshenziselwa ekudleni okuhlukahlukil. Iziqongo kanye namacwecwe kufanele kuhlanzwe futhi kubiliswe ukuze kuqede isikhumba ngaphambi kokuba kuphekwe. Izinyawo zezinkukhu zigcwele amaprotheni, i-calcium, i-collagen ne-cartilage. Kungaba kosiwe noma okubilisiwe ukukhiqiza umhluzi noma isitoko. Isikhumba kufanele sisuswe ezinyaweni ngaphambi kokupheka.